FANOHERANA FIFIDIANANA :: Fampielezan-kevitra hafa kely ny an’ireo solontenan’ny kandidà roa amby roapolo • AoRaha
FANOHERANA FIFIDIANANA Fampielezan-kevitra hafa kely ny an’ireo solontenan’ny kandidà roa amby roapolo
Nidina an-kianja. Hafa kely ny endrika fampielezan-kevitra ataon’ireo kandidà manohitra ny firosoana amin’ny fifidianana ratsy karakara. Teny amin’ny kianjan’ Ambohijatovo no naneho hevitra nizara an’ireo ahiahiny momba ireo lesoka manodidina ny fanomanana ny fifidianana filoham-pirenena ireo solontenan’ny kandidà miisa roa amby roapolo, mitaky ny fanavaozana ny lisi-pifidianana.
Nambaran-dRandria-manantsoa Tabera, izay kandidà amin’ny fifidianana filoham-pirenena hotanterahina amin’ny 7 novambra ho avy izao fa « mifono endrika fangalaram-bato sahady ny firafitry ny lisi-pifidianana ôfisialy navoakan’ ny Vaomieram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana (Ceni) ka tsy tokony ho azo ampiasaina ».
Isan’ireo nitarika ny hetsika teny an-toerana ihany koa ny kandidà Fanirisoa Ernaivo, izay nitanisa an’ireo lesoka samihafa manodidina ny fikarakarana ny fifidianana. Kandidà enina no nifandimby naneho hevitra teny an-toerana. Samy nanambara ny amin’ny tokony hanemorana ny fifidianana sy ny fandravana ny Ceni izy ireo. Na izany aza, tsy nohadinoin’izy ireo ny nampahafantatra ny laharany ao anatin’ny biletà tokana hampiasaina amin’ity fifidianana filoham-pirenena ity.
FAMPIASANA ANGIDIM-BY AMIN’NY FAMPIELEZAN-KEVITRA :: “Fahazoan-dalana azo tamin’ny fanaovana amboletra”, hoy ny ACM